Best FIFA Soundtracks of All Time – Gaming Noodle
FIFA ဂိမ်းအဆက်ဆက် အကောင်းဆုံး သီချင်းများ
ဒီတစ်ခါတော့ ဂိမ်းအကြောင်းတွေပဲ ဖတ်ရတာ ပျင်းနေလောက်ပြီဆိုတော့ ဂိမ်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ သီချင်းတွေ အကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။
ဘောလုံးကို ရူးသွပ်တဲ့ Admin တို့လို ပရိသတ်အများစုဟာ ဘောလုံးဂိမ်းတွေ ဖြစ်တဲ့ FIFA တို့ PES တို့လို ဂိမ်း တွေကို ၄,၅ တန်း အရွယ်ကနေ ယခုအချိန်ထိ ထိ ပိုးစိုးပက်စက် ဆော့နေဆဲပါ။
ငယ်စဉ်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဂိမ်းဆိုင်တွေမှာ တစ်နာရီ ဘယ်လောက်ဆိုပြီး ကန်နေတဲ့ ဘဝကနေ အခုအိမ်မှာ တစ်ယောက်တည်း Online ကနေ ကန်နေတဲ့ အထိ အမှတ်တရတွေများစွာ ရှိနေကြမှာပါ။
နောက်ဆုံး မိနစ်မှာ သွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့/ သွင်းခံခဲ့ရတဲ့ အနိုင်ဂိုးတွေ၊ ဂိုးသမားနဲ့ တစ်ယောက်ချင်းတွေ့ကာနီး လျှောထိုး ဖက်ထုတ်ခံခဲ့ရလို့ သူငယ်ချင်းနဲ့ တစ်ပါတ်လောက် စကားမပြောခဲ့တာတွေ၊ ဂိုး Replay တွေ အခါခါပြန်ကြည့်လွန်းလို့ စိတ်ဆိုးခဲ့ကြတာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့လို ဘောလုံးဂိမ်းချစ်သူတွေရဲ့ အမှတ်တရတွေပါပဲ။ နည်းနည်း ကြီးလာတဲ့ အခါကျတော့ မကျေနပ်ရင် ဂိမ်းခလုပ်ကို ကိုင်ပေါက်တာတို့ စက်ကြီး ပိတ်ပစ်တာတို့တွေပေါ့။ ဒါဟာ ဘောလုံးဂိမ်း player တွေရဲ့ Rage ချက်တွေပေါ့။
ဒါတွေအပြင် နောက်ထပ်ရှိနေသေးတဲ့ လှပတဲ့ အမှတ်တရတွေကတော့ သီချင်းတွေပါ။ FIFA မှာပါတဲ့ သီချင်းတွေဟာ FIFA ဆော့နေကျ Gamer တွေအတွက်တော့ အတိတ်ကို တသသ ဖြစ်စေမှာပါ။ အခုအချိန်မှာ ပြန်ဆော့တဲ့ game play ကို မကြိုက်နိုင်ပေမယ့် FIFA ဂိမ်းအဟောင်းတွေရဲ့ သီချင်းတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်တွေကို ပြန်လည် နှိုးဆွနေနိုင်ပါသေးတယ်။
အောက်က Youtube Playlist ကတော့ 1998 လောက်ကနေစတဲ့ FIFA ဂိမ်းတွေထဲက ယခုအချိန်ထိ အကောင်းဆုံး သီချင်း (၂၉) ကို BigTop40 website က ရွေးပေးထားတာပါ။
ဒါကို တစုတစည်းထဲ ပြန်လည် နားဆင်လို့ရအောင် Gaming Noodle ကနေ Exclusive Playlist လုပ်ပေးထားပါတယ်။
သီချင်းတွေထဲမှာ Pop, Rock, Rap အမျိုးအစား စုံလင်တဲ့အပြင် Avicii နဲ့ Calvin Harris တို့ရဲ့ Dance Music တွေလည်း ပါရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Imagine Dragon ရဲ့ “On Top of The World” လိုမျိုး ကိုယ့်ရဲ့ နိုင်ပွဲတွေကို ပြန်လည် အမှတ်ရနိုင်မယ့် သီချင်းတွေလည်း ပါရှိပါတယ်
BEST 29 FIFA Soundtracks of All time by BigTop40
21. The Strokes – ‘Machu Picchu’ (FIFA 12)
22. Empire of the Sun – ‘Alive’ (FIFA 15)
23. Moby – ‘Bodyrock’ (FIFA 2001)
24. Kings of Leon – ‘Red Morning Light’ (FIFA Football 2004)
25. Kygo – ‘ID’ (FIFA 16)
26. Foster The People – ‘Call It What You Want’ (FIFA 12)
27. Flo Rida feat. Lil Wayne – ‘Let It Roll Part 2’ (FIFA 13)
28. Years & Years – ‘Gold’ (FIFA 16)
29. Two Door Cinema Club – ‘Sleep Alone’ (FIFA 13)
FIFA ဂိမျးအဆကျဆကျ အကောငျးဆုံး သီခငျြးမြား
ဒီတဈခါတော့ ဂိမျးအကွောငျးတှပေဲ ဖတျရတာ ပငျြးနလေောကျပွီဆိုတော့ ဂိမျးနဲ့ ဆိုငျတဲ့ သီခငျြးတှေ အကွောငျး ပွောခငျြပါတယျ။
ဘောလုံးကို ရူးသှပျတဲ့ Admin တို့လို ပရိသတျအမြားစုဟာ ဘောလုံးဂိမျးတှေ ဖွဈတဲ့ FIFA တို့ PES တို့လို ဂိမျး တှကေို ၄,၅ တနျး အရှယျကနေ ယခုအခြိနျထိ ထိ ပိုးစိုးပကျစကျ ဆော့နဆေဲပါ။
ငယျစဉျက သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ဂိမျးဆိုငျတှမှော တဈနာရီ ဘယျလောကျဆိုပွီး ကနျနတေဲ့ ဘဝကနေ အခုအိမျမှာ တဈယောကျတညျး Online ကနေ ကနျနတေဲ့ အထိ အမှတျတရတှမြေားစှာ ရှိနကွေမှာပါ။
နောကျဆုံး မိနဈမှာ သှငျးနိုငျခဲ့တဲ့/ သှငျးခံခဲ့ရတဲ့ အနိုငျဂိုးတှေ၊ ဂိုးသမားနဲ့ တဈယောကျခငျြးတှကေ့ာနီး လြှောထိုး ဖကျထုတျခံခဲ့ရလို့ သူငယျခငျြးနဲ့ တဈပါတျလောကျ စကားမပွောခဲ့တာတှေ၊ ဂိုး Replay တှေ အခါခါပွနျကွညျ့လှနျးလို့ စိတျဆိုးခဲ့ကွတာတှဟော ကြှနျတျောတို့လို ဘောလုံးဂိမျးခဈြသူတှရေဲ့ အမှတျတရတှပေါပဲ။ နညျးနညျး ကွီးလာတဲ့ အခါကတြော့ မကနြေပျရငျ ဂိမျးခလုပျကို ကိုငျပေါကျတာတို့ စကျကွီး ပိတျပဈတာတို့တှပေေါ့။ ဒါဟာ ဘောလုံးဂိမျး player တှရေဲ့ Rage ခကျြတှပေေါ့။
ဒါတှအေပွငျ နောကျထပျရှိနသေေးတဲ့ လှပတဲ့ အမှတျတရတှကေတော့ သီခငျြးတှပေါ။ FIFA မှာပါတဲ့ သီခငျြးတှဟော FIFA ဆော့နကြေ Gamer တှအေတှကျတော့ အတိတျကို တသသ ဖွဈစမှောပါ။ အခုအခြိနျမှာ ပွနျဆော့တဲ့ game play ကို မကွိုကျနိုငျပမေယျ့ FIFA ဂိမျးအဟောငျးတှရေဲ့ သီခငျြးတှကေတော့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ မှတျဉာဏျတှကေို ပွနျလညျ နှိုးဆှနနေိုငျပါသေးတယျ။
အောကျက Youtube Playlist ကတော့ 1998 လောကျကနစေတဲ့ FIFA ဂိမျးတှထေဲက ယခုအခြိနျထိ အကောငျးဆုံး သီခငျြး (၂၉) ကို BigTop40 website က ရှေးပေးထားတာပါ။
ဒါကို တစုတစညျးထဲ ပွနျလညျ နားဆငျလို့ရအောငျ Gaming Noodle ကနေ Exclusive Playlist လုပျပေးထားပါတယျ။
သီခငျြးတှထေဲမှာ Pop, Rock, Rap အမြိုးအစား စုံလငျတဲ့အပွငျ Avicii နဲ့ Calvin Harris တို့ရဲ့ Dance Music တှလေညျး ပါရှိပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Imagine Dragon ရဲ့ “On Top of The World” လိုမြိုး ကိုယျ့ရဲ့ နိုငျပှဲတှကေို ပွနျလညျ အမှတျရနိုငျမယျ့ သီခငျြးတှလေညျး ပါရှိပါတယျ
#Nostalgia #FIFA #Soundtracks